Global Voices teny Malagasy » Ny Zava-misy Mahafadiranovan’ny ‘Amerikana Tsy Nahy’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Ny Zava-misy Mahafadiranovan'ny ‘Amerikana Tsy Nahy’
Voadika ny 28 Marsa 2018 5:17 GMT 1	 · Mpanoratra Guest Contributor Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Avaratra, Eoropa Andrefana, Belzika, Etazonia, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fifindràmonina, Lalàna, Mediam-bahoaka, Ny Tetezana - The Bridge
Sary avy amin'i Pablo Guerrero tao amin'ny Unsplash.
Etazonia no iray amin'ireo firenena roa monja manerantany mifototra amin'ny zom-pirenena ny hetra, fomba fanao iray izay nanakorontana ny fiainan'ny olom-pirenena Amerikana misafidy ny handao ny fireneny ary hiaina any ampitan-dranomasina.
Ho an'ny mponina iray manokana, na izany aza, hita fa mandrava kokoa ity rafitra ity sy ireo fepetra henjana amin'ny fampiharana azy. Fantatra amin'ny hoe “Amerikana tsy nahy”, olom-pirenena avy amin'ny firenen-kafa izay manana zom-pirenena amerikana ihany koa izy ireo, na izy ireo teraka tany Etazonia na nahazo izany tamin'ny iray amin'ny ray aman-dreniny. Mety tsy tsapany fa heverina ho olom-pirenena amerikana izy ireo raha tsy efa manomboka mijaly ny voka-dratsin'ny hetran'i Etazonia.
Iray amin'ireo Amerikana tsinahy i Kevin P. Rehefa avy namaky lahatsoratra iray nivoaka vao haingana tao amin'ny Global Voices mikasika ny tsy rariny mahafadiranovana apetraky ny rafitra hetra Amerikana amin'ny mpifindra monina , nahazo aingam-panahy izy mba hamerina hijery indray ny tantara mifototra amin'ny zava-niainany manokana . Eto ambany ny lahatsoratra nasiam-panovana.
Sario an-tsaina hoe tanora anisan'ny mponina mavitrika ianao. Tsy mbola manana zavatra betsaka ianao saingy manana fahafahana marobe hanao fiainana tsara ho an'ny tenanao sy ireo olon-tianao.
Tsy takatrao ny zava-mitranga; Tsy mbola nanana olana ianao hatramin'izao. Niaina ny fiainanao rehetra tany Eoropa ianao. Belza ny ray aman-dreninao, ka Belza ianao. Miteny frantsay ianao ary tsy mahay firy momba an'i Etazonia afa-tsy ny zavatra nianaranao avy amin'ny filma rehetra avy any.
Indray andro, mila manokatra kaonty amin'ny banky ianao. Fa na aiza na aiza iezahanao hanokatra izany, alefa mody miala maina ianao. Very hevitra ianao. Lazainy aminao fa misy ifandraisany amin'ny toerana nahaterahana voasoratra ao amin'ny kara-panondro izany.
Amin'izao fotoana izao, mihitsoka ny fiainanao, ka manadihady izany ianao. Ny zavatra hitanao dia ny zava-misy mahafadiranovana mikasika ny fomba fitondran'i Etazonia ny olom-pireneny any ivelany: ny fandoavana hetra roa sosona, ny fanagonana tahiry betsaka ary ny fiheverana anao mialoha ho meloka. Tsy banky fotsiny intsony ny banky, ary tsy firenena fotsiny intsony ny firenena. Samy lasa mpiasa mpilaza vaovao ao amin'ny biraon'ny hetra Amerikana ny roa tonta.
Miaraka amin'ny fihetseham-po ratsy manelingelina anao, mbola tsy azonao izany. Raha ny marina, tsy tena amerikana ianao. Tsy niaina, nianatra na niasa tany Etazonia ianao. Teny Anglisy vitsy no mba fantatrao ary mampihomehy ny firokinao Frantsay.
Izany no nahitanao fa ao amin'ity tontolo hafahafa mahafadiranovana ity, manana toerana manokana ianao.
Tsy Amerikana any ampitan-dranomasina ianao, tahaka ireo 9 tapitrisa hafa. Tsy mbola nanana finamanana na fifandraisana amin'ny manampahefana Amerikana ianao. Tsy manana taratasy Amerikana afa-tsy ny taratasy fanamarinam-piterahanao ianao.
Toa nifaly fony tany Etazonia ny ray aman-dreninao, ka teraka tany ianao, saingy niverina tany Belzika raha mbola zazakely. Nobeazina tany Belzika ianao, nianatra tany Belzika, ary lasa mpikambana mavitrika ao amin'ny fiarahamonina Belza.
Firenena manana fiandrianana misy sisintany i Belzika izay tokony hiavaka eto an-tany ary ahafahan'ny olom-pireneny manantena fiarovana manoloana ny governemanta vahiny. Misaintsaina izany, nifandray tamin'ny manampahefan'ny firenenao ianao mba hitady fanampiana. Feno fanantenana, azonao an'eritreritra ny resadresaka hiseho miaraka amin'ny mpiray tanindrazana mitsiky sy mangoraka izay hanao izay azony atao mba hanampiana anao.
Tena tsontsa loatra ianao?
Manomboka tamin'ny resakao tamin'olon-kafa milaza aminao fa tsy tokony hisy ny olanao. Tsirinkevitra tsy mifanaraka amin'ny fomba fisainan'olona tsotra ivelan'i Etazonia ny hetra mifototra amin'ny zom-pirenena. Noho izany, mila manao izay vitanao ianao mba handresena lahatra azy ireo mikasika ny tena zava-misy iainanao.
Rehefa vitanao ny manova ny fomba fijeriny, dia tonga ny famelezana voalohany: milaza aminao izy ireo fa tsy olany izany, ary noho izany ianao ihany no mamaha ny olanao. Amin'izay fotoana izay, niala tamin'ny sehatra dystopiana (mahafadiranovana) ka nivadika ho Kafkaesque (tsy tiana, maharikoriko, mampisarita-tsaina) ny resaka. Mieritreritra fanahy very tsy manana firenena ny sainao.
Avy eo dia tonga ny famelezana faharoa, avy amin'ny mpiasam-panjakana kely karama, minisitra na ambasadera, izay milaza aminao ity fahamarinana tsotra ity: satria Etazonia izany, tsy hanao na inona na inona izy ireo.
Mbola fanina tamin'ny teo aloha, tsaroanao ny tenanao mieritreritra mpiray tanindrazana mitsikitsiky sy mangoraka, saingy eto ianao. Mitsikitsiky aminao izy ireo, tsy hoe mangoraka, fa noho ianao manelingelina azy ireo, ary milaza aminao ny mason'izy ireo fa raha miala haingana kokoa ianao, dia ho tsara kokoa ny fiainan'izy ireo.
Ary niverina an-tanindrazana ianao.
Mandeha ny fotoana. Hitanao fa tsy irery ianao  amin'ity toe-javatra ity. Mihaona amin'ireo vondron'olona somary miaritra ny hetra mifotora amin'ny zom-pirenena Amerikana ianao . Mizara ny fihetseham-ponao amin'izy ireo, ary mahita fa misy olona eto sy any ho any miasa hanatsara ny toe-draharaha, mahatonga anao hahatsapa ho tsaratsara kokoa. (Misaotra an'izany ry namana mpiara-mijaly.)
Saingy niova tanteraka ianao. Fantatrao fa tsy miaro ny olom-pireneny ny firenenao. Mijery ny sainam-pireneny ianao ary mahita mariky ny fihatsarambelatsihy. Mijery ny sainam-pirenen'i Etazonia ianao ary mahita mariky ny fanaintainana.
Ao amin'ity tontolo mahafadiranovana ity, tsy misy toerana ho anao. Sady tsy any Etazonia, no tsy any an-tanindrazanao. Alikan'i Etazonia ny firenenao, ary sarobidy kokoa noho ianao ny parasy eo an-damosiny.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/28/116723/
 lahatsoratra iray nivoaka vao haingana tao amin'ny Global Voices mikasika ny tsy rariny mahafadiranovana apetraky ny rafitra hetra Amerikana amin'ny mpifindra monina: https://globalvoices.org/2018/03/12/citizenship-surveillance-and-taxes-a-dystopian-tale/
 hamerina hijery indray ny tantara mifototra amin'ny zava-niainany manokana: https://globalvoices.org/2018/03/12/citizenship-surveillance-and-taxes-a-dystopian-tale/#comment-2091491
 tsy irery ianao: https://american-accidental.com/en/who-are-accidental-americans-survey-people-answers/
 Mihaona amin'ireo vondron'olona somary miaritra ny hetra mifotora amin'ny zom-pirenena Amerikana ianao: https://www.facebook.com/groups/accidental.americans/